10-ka Sifo Ee Lagu Garto Qofka Leh Kartida Iyo Awooda Abuur Ganacsi - Daryeel Magazine
10-ka Sifo Ee Lagu Garto Qofka Leh Kartida Iyo Awooda Abuur Ganacsi
Waxa la isku raacay 10 sifo oo gaar u ah dad ka leh hal abuur ka ganacisiyada yar-yar. 10 kan sifo waxa loo yaqaab “ 10 DS” ama 10 xaraf ee ka bilowda “ D “ laakiin marka aan ku qoro Af-Soomaaliga waxa ku qurux badan xaraf ka Af Soomaaliga ee “ H “. Taasina waxa ay ka dhigaysaa 10 xaraf ee “ H’ da ah.
Hal beegan xarfaha ah waxaa lagu cabiraa qofka leh awooda iyo kartida hal abuur ganacsi. Hadaba isku eeg muraayda in aad leedahay sifooyin kaan. Hadii aad leedahay sifooyin kan 10 ka ah, waxa hubal ah in aad guulaysanayso, Hadiise aadan lahayn sifooyin kan, ma buurna guusha aad ka gaari doonto hadii aad bilowdo shirkad ama ganacsi yar.
1. HIMILO: Dad ka abuura ganacsiyada yar-yar waxa ay aaminsan yihiin hindise / saadaal ku aadan sida iyaga iyo ganacsi goodu noqon doono mustaqbal ka. Iyo awood ay ku fuliyaan hawadooda iyo sadaashaa.
2. HORMUUD: Hawsha ma dib dhigaan. Waxa ay qaataan go’aan dhaqso ah. Guushooda ugu horaysa waxa ay ku jirtaa go’aan ka dhaqsaha ah.
3. HILLOW: Dad ka abuura ganacsiyada yar-yar sameeya waa dad inta badan aad u jecel ama hiwaayad ay u tahay waxa ay samaynayaan.
4. HURID: Waxa ay si buuxda ugu horaan naftooda hawsha iyo ganacsiga ay hayaan, iyadoo mar mar ay dhacdo iyo dhibaato ay ka qabsato xiriir ka qoys iyo saaxiibadooda tan daraadeed. Waxa ay u shaqeeyaan si daal la’aan ah. 12 saac maalin kasta, 7 maalin asbuuci , waxa ay la tahay caadi inta ganacsi goodu uu cagaha dhulka kala kacayo.
5. HANTI WADAAG: Dad ka abuura ganacsiyada yar-yar waxa ay la wadaagaan lahaansha ha ganacsi gooda shaqaalaha laf dhabar ka u ah guusha ganacsiga.
6. HAL ADAYG: Hawshooda waxa ay u qabtaan si hal adayg leh. Ma quustaan, mana rajo dhigaan xitaa hadii ay soo wajahdo caqabad u muuqata in aan laga gudbi Karin.
7. HAN: Waxa ay doonaan in ay hantaan aaya hooda oo aysan hoos tagin ama u shaqayn qof ama shirkad kale.
8. HADAF: Ujeedada ugu horaysa ee dad ka bilaaba ganacsiyada yar-yar ma aha in isla markaa ay helaan lacag ama noqdaan qani.Waxa ay aaminsan yihiin marka ay guulaystaan kadib in ay helayaan lacag.Lacagtu waxa ay noqotaa bar tilmaameed dambe oo la gaaro.
9. HUBIYE: Marka ay bilaabaan ganacsi yar waxa ay xaqiijiyaan in wax kasta ay yihiin si sax ah, iyag oo baaraya tafaasiil kasta si faahfaah san. Waxa ay isku dayaan in ay kaga horeeyaan cid kasta hawsha ay hayaan.
10. HAWL GAL: Marka ay go’aan sadaan in hawl isla socota ay qabtaan , salka dhulka ma dhigaan ilaa ay ka hawl galaan una dhameeyaan hawshaas sida ugu dhaqsiyaha badan.
Qore: ABDULKADIR “ INDHO”
Calaamadaha Lagu Garto Qofka Ku Neceb Awooda iyo Saameynta erayada lagu hadlo 10 Astaamood Oo Muujinaya Inaad Diyaar U Tahay Ganacsi Qofka Oo Naftiisa La Sheekaysta Waxay Xoojisaa Awooda Xusuusta Maskaxda